China H20 Timber Beam Wall Formwork ifektri nabahlinzeki |I-Lianggong
I-Wall formwork iqukethe i-H20 yamapulangwe, ama-walings ensimbi nezinye izingxenye zokuxhuma.Lezi zingxenye zingahlanganiswa amaphaneli e-formwork ngobubanzi nobude obuhlukene, kuye ngobude be-H20 be-beam obufika ku-6.0m.
Izinsimbi zensimbi ezidingekayo zikhiqizwa ngokuhambisana nobude obukhethekile bephrojekthi.Izimbobo ezimise okwesikhathi eside kuzixhumi zensimbi nezixhumi eziwayo ziphumela ekuxhumekeni okuqinile okuguquguqukayo okuqhubekayo (ukushuba nokucindezelwa).Lonke ilunga elilengayo lixhunywe ngokuqinile ngesixhumi esihehayo kanye nezikhonkwane ezine ze-wedge.
Ama-panel struts (abuye abizwe ngokuthi i-Push-pull prop) agxunyekwe ku-waling yensimbi, esiza ukumiswa kwamaphaneli e-formwork.Ubude bezintambo zephaneli bukhethwa ngokuya ngobude bamaphaneli e-formwork.
Kusetshenziswa ubakaki wekhonsoli ephezulu, amapulatifomu asebenzayo kanye nekhonkrithi afakwa odongeni.Lokhu kuqukethe: ubakaki wekhonsoli ephezulu, amapulangwe, amapayipi ensimbi nezixhumi zamapayipi.
1. Uhlelo lwesakhiwo sodonga lusetshenziselwa zonke izinhlobo zezindonga namakholomu, ezinokuqina okuphezulu nokuzinza ngesisindo esiphansi.
2. Ingakhetha noma iyiphi impahla yobuso ehlangabezana kangcono nezidingo zakho - isb.
3. Kuye ngokucindezelwa kukakhonkolo okudingekayo, imishayo kanye nensimbi yensimbi ihlukaniswa ngokuseduze noma ngokuhlukana.Lokhu kuqinisekisa ukwakheka okuhle kwefomu-umsebenzi kanye nomnotho omkhulu wezinto zokwakha.
4. Ingahlanganiswa kusengaphambili esizeni noma ngaphambi kokufika endaweni, ukonga isikhathi, izindleko nezikhala.
5. Ingahambisana kahle nezinhlelo eziningi ze-Euro formwork.
Beka ama-waler endaweni yesikhulumi ebangeni eliboniswe emdwebeni.Maka umugqa wokuma kuma-waler bese udweba imigqa ediagonal.Vumela imigqa edayagonali yonxande eyakhiwe yinoma yimaphi ama-waler amabili alingane.
Ukuhlanganisa ugongolo lwamapulangwe
Beka ugodo emikhawulweni yomibili ye-waler ngokuya ngobukhulu obuboniswe emdwebeni.Maka umugqa wokuma bese udweba imigqa ediagonal.Qinisekisa ukuthi imigqa ediagonal yonxande eyakhiwe yimishayo emibili yezingodo elingana nomunye.Bese uwalungisa nge-flange clamps.Xhuma isiphetho esifanayo semishayo emibili yamapulangwe ngomugqa omncane njengomugqa wokuma.Beka eminye imishayo yamapulangwe ngokomugqa wokuma futhi uqinisekise ukuthi ihambisana nemishayo yamapulangwe ezinhlangothini zombili.Lungisa ugodo ngalunye ngezinsimbi.
Ukufaka ihuku lokuphakamisa phezu kogodo lwepulangwe
Faka izingwegwe zokuphakamisa ngokusho kobukhulu bomdwebo.Izinsimbi kufanele zisetshenziswe ezinhlangothini zombili zogodo lwepulangwe lapho ihuku likhona, futhi uqinisekise ukuthi izinsimbi ziboshiwe.
Sika iphaneli ngokusho komdwebo bese uxhuma iphaneli ngogongolo lwamapulangwe ngezikulufa zokuzithepha.
Okwedlule: I-H20 Timber Beam Slab Formwork
Olandelayo: I-Wing Nut